မြန်မာ့သားကောင်း: တန်ဖိုးနည်းကျပ်(၁၅၀၀)တန်ဆင်းကတ်အတွက် ဟန်းဆက်ကြိုတင် ၀ယ်မထားသင့်….
တန်ဖိုးနည်းကျပ်(၁၅၀၀)တန်ဆင်းကတ်အတွက် ဟန်းဆက်ကြိုတင် ၀ယ်မထားသင့်….
ကျပ်(၁၅၀၀)တန်၊တန်ဖိုးနည်းဖုန်းဆင်းကတ်များသည် 800MHz ဟန်းဆက်တိုင်းတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြု လို့ရသည်ဆိုသော်လည်း ဈေးပေါသည့်တရုတ်ဟန်းဆက်များတွင် ကတ်မဖတ်ခြင်းများရှိနေပြီးအမြင့်ဟန်း ဆက်အချို့မှာလည်းချက်ချင်းထည့်ပြီး အသုံးပြုလို့ မရခြင်း များ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။Today's Mobil မှမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဦးနေလင်းထွန်းက တန်ဖိုးနည်း ဟန်းဆက် များတွင် Key pad ဆမ်ဆောင်း 339 သည်ဆော့ဖ်ဝဲ ပိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးမှအသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးအရမ်းနည်းပြီးအရည် အသွေးနိမ့် လွန်းသည့် ဟန်းဆက်များတွင် အသုံးပြုရန် အဆင် မပြေကြောင်း၊Tablet များနှင့်လည်းလိုင်း အတက် အကျများဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ကျပ်(၁၅၀၀) ဖုန်းဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ဟန်း ဆက်ကိုကြို တင်ဝယ် ယူမထားသင့်ဘဲ ကိုယ့်လက်ထဲကို ကတ်ရောက် မှသာ ဟန်းဆက် ဆိုင် တွင် သေချာ ထည့်သွင်း စမ်းသပ်ပြီးမှဝယ်ယူသင့် ကြောင်း အကြံပြုပြော ကြားပါသည်။ လတ်တလော မြို့နယ်အတော်များများတွင် ကျပ်(၁၅၀၀) တန်ဖုန်းဆင်းကတ် ကို မဲနှိုက် ၀ယ်ယူရသည့် အပေါ်အငြင်းပွားမှု၊ မပြေလည်မှုပြဿနာ များ ရှိနေကြောင်း ကြားသိနေ ရပြီးဖုန်း ၀ယ်ယူ လိုသူ များပြားသည့်အတွက်ပြင်ပပေါက်ဈေးသည်လည်း နယ်မြေဒေသပေါ် မူတည်ပြီး မူရင်း ဈေးထက် အဆပေါင်းများစွာမြင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။
At 4/27/2013 11:50:00 AM